दाङमा ९४ जनाले आत्महत्या गरे « Tulsipur Khabar
दाङमा ९४ जनाले आत्महत्या गरे
बसन्त परियार,तुलसीपुर १३ फागुन ।
फागुन ७ गते दाङको तुलसीपुरमा एक महिलाले आत्महत्या गरिन। रुकुम घर भएकि ६० बर्षिय कुमारी बुढामगरले कोठा भित्र झण्डीएर आत्महत्या गरेकि हुन्। घरमा छोराको खट्टा भाच्चिएको खबर सुनेर उपचार गर्नें भन्दै उनको परीवार नेपाल फर्किएको थियो । फागुन ८ गते नेपाल बन्द भएपछि उनिहरु ज्वाईको घर तुलसीपुरमा बास बसेका थिए । तर श्रीमान् भारु पैसा साट्नका लागि बजार गएको बेला उनि कोठाभित्र चुकुन लगाई झुण्डीएर आत्महत्या गरेको बताईएको थियो ।
गएको माघ महिनामा पनि तुलसीपुर ७ हात्तिखौवा निवासि बर्ष १६ की सलिना थापाले झुण्डीएर आत्महत्या गरेकि थिईन् । उनले सुसाईड नोट लेखेर आत्महत्या गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर बताउछ । त्यसैगरी घोराही निवासि बर्ष २३ कि कल्पना चौधरीले गत माघमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन्। उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालीका ५ मा विष सेवन गरि आत्महत्या गरेकि हुन।
यसरी आत्महत्या गर्नेहरुमा यी त उदाहरण मात्र हुन। दाङमा वितेको सात महिनामा झण्डै एक सय जनाले यसरी आत्महत्या गरेका छन। चालु आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ को श्रावण देखि माघ मसान्त सम्मको अवधिमा ९४ जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको मुद्धाफाटका प्रहरी नायव निरीक्षक निर्मल खत्रिले बताए । उनका अनुसार ६१ जनाले झुण्डीएर आत्महत्या गरेका छन भने ३३ जनाले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन ।
सबै भन्दा बढि असोज र कार्तिक महिनामा २०/२० जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी श्रावणमा १२,भाद्रमा १३,मंसीरमा १०,पुसमा ८ र माघमा ११ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी नायव निरीक्षक खत्रिले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा बर्षे्नि आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । जसमा महिलाहरु बढि छन। यस्तै वितेको आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा दाङमा १ सय ७० जनाले आत्महत्या थिए। झुण्डीएर १ सय ३ र विष सेवन गरी ६७ जनाले आत्महत्या गरेका हुन।
किन रोज्दछ त मानिसले आत्महत्याको बाटो ?
आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसन रहेको छ । यसैगरी सामान्य झै–झगडाको प्रतिशोध, अशिक्षा, प्रेममा असफलता,गरिबी नै आत्महत्याको मुख्य कारण बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङकि प्रहरी प्रमुख दुर्गा सिंह बताउछिन।
नेपालमा सामान्यतया घरेलू हिंसा प्रेम सम्बन्ध, बलात्कार अनिच्छित गर्भधारण, पारिवारीक बेमेल, पती या पत्नीको दोश्रो विवाह, हरेक निहुँमा पाउने मानसिक यातना, प्रताडना, पढाईमा असफलता अत्यधिक ऋणभार, मानसिक विचलन नै आत्महत्याको प्रमुख कारण बनेको एसपी सिंहको् भनाई छ ।
त्यसैगरी जिवनका सामन्य समस्यामा जुध्न नसकेर जिवनबाट मुक्ति पाउने प्रमुख सजिलो उपाय आत्महत्या भएकोले मानिसहरुले यसलाई रोज्ने गरेको प्रहरी प्रमुख सिंह बताउछिन। उनका अनुसार अव देखि आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई समेत कारवाही हुने छ। वि.स.२०७५ भदौ १ गते देखि नै यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आउने एसपी सिंहको भनाई छ । जस्ले आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो,उस्ले अव सजाय भोग्नेछ, सिंहले भनिन् ।
आत्महत्या गर्नेलाई रोक्ने उपाय के छ ?
आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसन भएकाले डिप्रेसनको उपचार गर्न जरुरी भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। आत्महत्या गर्न खोज्ने मानिसहरूको लक्षण देखिएमा सो उसको समस्यालाई खोज्ने र समाधानको उपाय निकाल्ने गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउछन । धेरै समय ऊसँग बिताउने, भलाकुसारी गरी प्रशस्त कुराकानी गर्ने, मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गरिदिनुपर्ने चिकित्सहको भनाई छ ।
विशेष गरेर मनोपरामर्श तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर यस्को रोकथाम गर्न सकिन्छ ।